Sula i-Brew | Ukuhlanza amaFranchise | Franchiseek
»Amathuba weFranchise»Sula i-Brew Franchise
Ngokomthetho Ukuhlanza imigqa kabhiya kusukela ngo-2006
Izindlela zethu ezivivinyiwe nezivivinyiwe, kanye nezakhiwo zethu zokuxuba, ezithathwa ngamanzi, amakhemikhali aholela emakethe kanye nezimboni ezihlolwe embonini, kusho ukuthi inkonzo yethu yokuhlanza imigqa yokuhola yokuhola eqondiswa yi-eco inciphisa izindleko, inciphisa imfucuza, inciphisa ubungozi, igcina futhi izimo eziningi, kuthuthukisa okusalungiswa kwekhwalithi yobhiya. Ngaphandle kwezindleko ezibheke phambili futhi zingafuni izinkontileka, i-clear Brew iba insizakalo ebalulekile yokuphindaphinda abathengi abathembele kuyo futhi abajabule ukukuvumela.
Franchisees yethu yamanje
Sinethiwekhi yezwe lonke yomnikazi / abahlinzeki abaqeqeshiwe abakukhathalela ngenhliziyo yonke lokho abakwenzayo ngokunikeza insizakalo ebonakalayo engeza inani kunoma yimuphi umhlinzeki emkhakheni wanamuhla onelayisense. Sisanda kwamukela i-franchisee yethu yama-41, esizibophezele futhi sayisayinisa imibukiso emibili emikhulu yokuqeda lo nyaka kanye neminye imibukiso emi-2 ebhaliselwe ikota yokuqala yonyaka we-2019 konke okugxile ekuqwashiseni ngomkhiqizo ezweni lonke kanye nokuhlanganiswa. Akukaze kube ngcono isikhathi sokuzibandakanya!
I-clear Brew ibheke ukuqhubeka nokunwebeka ezweni lonke futhi ifuna abantu abagqugquzelwa kakhulu abanomdlandla, bezokuxhumana okuhle futhi abanesifiso sokuphumelela. Ngokukhetha i-Open Brew Ltd, ungaba umphathi wakho, usebenzisa i-franchise ephumelela kakhulu ngesakhiwo sakho esikhulu, esivikelekile, iphakethe lokuqeqesha, iphakethe lemishini ephelele, ukuqaliswa kokuthengisa kanye nokuxhaswa okugcwele okuqhubekayo. Leli yithuba elihle ngempela elinephakethe eliphelele ku- $ 17,500 XNUMX plus VAT kuphela. Ungaqhuba ibhizinisi lakho ekhaya futhi ujabulele izinzuzo ezinjengezembozo eziphansi, ukuhamba kwemali okuhle kwansuku zonke, imashi yemiklomelo ephezulu kanye namandla amakhulu okukhula. I-Franchise inikeza insizakalo ebalulekile yokuphindaphinda kumakhasimende akho, noma ngabe sinjani isimo somnotho. Ngaphezu kwalokhu manje siyaziqhenya ngokuba ngamalungu e-Approved Franchise Association, eye yamukela i-Code of Ethics for Franchising evela kwi-European Franchise Federation.
Uma ungathanda ukuthola okuningi ngaleli thuba elijabulisayo le-Franchise Opportunity, sicela ushayele 01209 703965 noma vele ugcwalise lefomu lokuxhumana elingezansi.